भियतनामका सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू, तिनीहरूलाई खोज्नुहोस् यात्रा समाचार
भियतनामका सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
Susana Garcia | | एशिया यात्रा, भियतनाम
हाम्रो मार्ग सुरू गर्नु अघि केही आधारभूत जानकारी जान्नु आवश्यक छ, के तपाईंलाई लाग्दैन? खैर, सबै भन्दा पहिले हामीले यो भन्नु पर्छ कि भियतनाममा एक छ विभिन्न जलवायु क्षेत्रहरूको साथ लामो र विविध तटवर्ती, र त्यो सामान्यतया वर्षा छ।
यो पनि उल्लेख गर्नु महत्त्वपूर्ण छ देश मा सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट तिनीहरू सामान्यतया दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित छन्। साथै, यो जान्नु राम्रो हुन्छ कि भियतनामको समुद्री तटहरू हेर्नको लागि उत्तम समय डिसेम्बर देखि मे महिना हो। यस मौसममा तपाइँ एकदम चिसो र आर्द्र मौसम पाउनुहुनेछ, थोरै वर्षाको उपस्थितिको साथ।
यसको विपरित, भियतनामको समुद्री किनारहरूको आनन्द लिन कम्तिमा सिफारिश गरिएको मौसम जुलाई र अक्टुबर बीच हो किनकि तपाईं अवस्थिति पाउन सक्नुहुन्छ वर्षा र टाइफुनहरू र पर्यटकहरूको ठूलो संख्या पनि छ किनभने धेरै मानिसहरूले यस समयमा उनीहरूको बिदाको आनन्द लिइरहेका छन्। एक पटक यी सबै विवरणहरू ज्ञात भएपछि, हामी भियतनाममा सबै भन्दा राम्रो समुद्री तटमा डुबुल्की मार्न सक्छौं।
1 चीन बीच
3 मुइ ने बीच
4 होन चोंग बीच
5 फु क्वोक टापु
चीन बीच एक समुद्र तट हो बीचमा अवस्थित Danang र Hoi एक। यो समुद्री तटलाई उत्तर अमेरिकी सैनिकहरूले सन् १ 70 of को दशकमा छनौट गरेको थियो जब सेनाको अवतरण भएको थियो, जसले यसलाई यो नाम प्रयोग गर्न प्रयोग गर्थे। वास्तवमा स्थानीयहरूले यसलाई गैर न्यूओक भन्छन्।
यो एक विशाल छ तीस किलोमिटर बलुवा क्षेत्रयसैले यो धेरै जनसंख्याको हो। सबैभन्दा उत्तरी भाग दानang हो, र दक्षिणी भाग होई एन हो। समुद्री तटमा त्यहाँ बस्नका लागि थुप्रै रिसोर्टहरू छन् किनकि यो सबैभन्दा पर्यटकीय तट हो।
यस समुद्री तट नजिकै पनि छन् धेरै ठाउँहरू पत्ता लगाउन। होइ अनको रोचक फिशिंग पोर्ट छ, जहाँ तपाईं यसको मान्छेहरूको जीवन देख्न सक्नुहुनेछ, वा फिing्ग एनगा वा गुरूको शाही शहरको गुफाहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।
अब हामी सर्नेछौं Nha Trang, भियतनामी रिभिएरा भनेर चिनिन्छ। यो एक धेरै शान्त ठाउँ हो जुन धेरै मित्रैलो स्थानीयहरूको लागि घर हो। समुद्र तट एकदम सेतो बालुवा हो, जुन समुद्रको निलो र हरियो पहाडहरू र यसको वरिपरिका ताडको रूखहरूसँग तुलना गर्दछ। तपाईले यो कुरा थाहा पाउँदा खुशी हुनुहुनेछ कि तपाईले यहाँ शोर वा प्रदूषण भेट्टाउनु हुन्न। अद्भुत! यस समुद्री तटमा जानको लागि उत्तम समय के हो? अक्टोबरदेखि मे महिनासम्म।
यसमा धेरै आकर्षणहरू छन् मनमोहक समुद्रतट शहर, यसको अद्भुत खाडी जस्तो। यद्यपि यसको समुद्री तटहरूले धेरै मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दछ जो सर्फ वा गोताखोरमा आउँदछन्। एक विश्राम र एक बिट शांतताको आनन्द लिनको लागि एक उत्तम स्टप।
मुइ ने बीच
भ्रमण गर्ने समय मुइ ने बीच, एक केपमा स्थित छ २० मिनेटको शहरबाट कारबाट फान थियट। यो समुद्र तटमा बालुवाको टिब्बाको शानदार र रमणीय परिदृश्य छ भनेर थाहा पाउँदा तपाईं खुशी हुनुहुनेछ। तपाईं सेतो देखि रातो रातो छायाँमा लामो टिब्बा देख्न सक्नुहुन्छ, ताल र एक रातो रातो भित्ताहरू भएको सानो घाटीमा बग्ने धाराको साथ, यसैले प्राकृतिक वातावरण धेरै रोचक छ।
यी सबैको लागि यो देशको सबैभन्दा सुन्दर समुद्र तटहरू मध्ये एक मानिन्छ घरहरू प्राकृतिक परिदृश्यहरू यो अन्य समुद्र तटहरूमा फेला पार्न असम्भव छ, मानौं यो एक सानो स्वर्ग हो।
तपाईले जान्न पनि चाहानुहुन्छ कि यो एक हो १० किलोमिटर समुद्र तट मछुवाहरूले जनसंख्या जो समुद्रमा आफ्नो कार्यहरू, सुरम्य छविहरू प्रस्तुत गरेर। थप रूपमा, समुद्री किनारा एकदम हावा चलेको छ, जसले कइटसर्फि suitableलाई उपयुक्त बनाउँदछ। तपाईं हिम्मत?
यो उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि सबै भन्दा राम्रो मौसम बीचमा हो भनेर जान्नको लागि डिसेम्बर र मे। जे होस्, मौसम २ hot डिग्री सेल्सियसको औसत तापक्रमको साथ वर्षभरि एकदम तातो र सुख्खा छ, त्यसैले यो कुनै पनि समय भ्रमण गर्न सकिन्छ, विशेष गरी जब देशको अन्य भागहरूमा वर्षा हुन्छ।
होन चोंग बीच
यससँग जारी राखौं होन चोंग बीच, जुन हामी डिसेम्बर देखि मे महिनाको भ्रमणको सिफारिस गर्दछौं। यो समुद्री तट कम्बोडियाको सीमामा लगभग अवस्थित छ, यो दम्पतीहरूका लागि धेरै मोहक र आकर्षक छ। यसको नरम सेतो बालुवा र शान्त उष्णकटिबंधीय पानीले तपाईंलाई कहिल्यै घर फर्कन चाहँदैन। यो धेरै भियतनामी समुद्री किनारको खडबडी पानीमा भागेका लागि यो उत्तम विकल्प हो। स्नोर्कलिंग जस्ता खेल गर्नका लागि आदर्श स्थान।
फु क्वोक टापु
हामीले अन्ततः बिदाइ गरे फु क्वोक टापु। यस टापुमा बिल्कुल शानदार समुद्री किनारहरू छन्, जुन उष्णकटिबंधीय परिदृश्यबाट बाहिर आउँदछन्, जस्तै बाई टम बीच। हामी तपाईंलाई डिसेम्बर देखि मे महिनाको बीचमा यस समुद्र तटमा आउने सल्लाह दिन्छौं।
तपाईले यो जान्न खुशी हुनुहुनेछ कि फु क्वोक टापु, यसमा हिमाल, जsts्गल र बलौटे तटहरू छन्। अर्को शब्दहरुमा, प्रकृति प्रेमीहरु को लागी एक सही ठाँउ। यो त्यो स्थान हो अझै धेरै शोषण गरिएको छैन, त्यसैले यसको यसको कुनामा पत्ता लगाउन तपाईंले यसको फाइदा लिनुपर्नेछ। योसँग केवल दुई शहरहरू छन्, र बाँकी उष्णकटिबंधीय वनस्पति र ठूलो समुद्र तटहरू हो जहाँ तपाईं शान्त र निर्मम हुन सक्नुहुन्छ, सेतो बालुवा, ताडको रूखहरू र तपाईंलाई चाहिने सबै कुराको साथ एक आइडिलिक ठाउँमा समुद्रीतटमा जाँदा।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » एशिया यात्रा » भियतनाम » भियतनामका सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
भियतनाम एक पारिवारिक हो, एशियाको स्विW्ग पिपल, एक सपना छ, म खेल्नको लागि फेस्टिभल्समा जान्छु (म एक सरदार हुँ) यो एक अद्भुत देश हो र तपाईं आफ्नो जीवनमा यसमा अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ।
CARLOS लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं कुन चाडहरूमा जानुहुन्छ? के तपाईंसँग केहि लिंक छ जुन तपाईं मलाईमा पठाउन सक्नुहुन्छ>)
नमस्कार, म नाहा ट्रrang्गमा छु (हामी //२/27/२०१6 मा छौं) यो एक महान सहर हो, एकदम सुन्दर र लगभग पश्चिमी, तर यहाँ वर्णन गरिएको समुद्री किनारलाई "वर्तमान" वास्तविकतासँग कुनै सरोकार छैन।
मँ यो ब्ल्गका लागि मिति पाउन सक्दिन तर जान्नुहोस् कि आज यो शोर समुद्र हो, मान्छेले भरिएको छ र यसको सम्पूर्ण वाटरफ्रन्ट 5-तारे होटेलले भरिएको छ जस्तै Sheraton। त्यो मात्र।
PS: Mui Ne, सबै चीजको लागि सुपर महँगो मूल्य। यहाँ Nha Trang सुपर सस्तोमा, हामीले dollars डलरमा प्रशंसक र चिसो पानी भएको डबल कोठा पायौं, गेस्ट हाउसको नाम हो H्ग DIEP।
भियतनामको समुद्री तटमा आज कोही छ, अहिले म आंकगोरमा छु र म हल Hal्ग बे भ्रमण गर्नेछु भियतनामको कुन समुद्री तट तपाईं सिफारिस गर्नुहुन्छ?
Ito लाई जवाफ दिनुहोस्
भियतनाम टुडे भिसा भन्यो
मलाई यी स्थानहरू मनपर्दछ। भियतनाम महान पर्यटक आकर्षणले भरिएको छ। मैले त्यहाँ भर्खर यात्रा गरेको छु। मलाई विशेष गरी हनोईमा समय बिताउन मन पर्छ।
भिसा भियतनाम टुडेलाई जवाफ दिनुहोस्
बाली, इन्डोनेसियाको सबैभन्दा सुन्दर टापु
Andalusian पश्चिमी तटमा हराउनुको कारण (II)